Ngwaahịa ngwaahịa - N'ogbe Products Manufacturers, Suppliers
Na-egbu maramara JB121311
Aka mgbodo: PA Plastic, Otu size dabara niile, size nwere ike ịbụ mgbanwe. Wheel: 82A PU wheel with 4-Front LED flashing lamp, size: 72 * 24mm Iburu: Ọsọ ọsọ carbon nchara ABEC-5 Akụrụngwa: Efere ígwè e ji ígwè mee na chrome esichara, mgbe nchara. Mbukota: Onyinye igbe, 20 ụzọ abụọ / ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / ụzọ abụọ: $ 5.20 Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ: ọhụrụ ihe, na-egbuke egbuke agba, elu ike, ezi mgbanwe Wheel Ihe: ịkwanyere, na ụfọdụ ekwedo na-eyi ndị na-eguzogide Iburu: Iron amị, ezigbo onye na ọ dịghị resis ...
Na-egbu maramara JB111311
Aka mgbodo: PA Plastic, Otu size dabara niile, size nwere ike ịbụ mgbanwe. Wheel: 82A PU wheel with 4-side LED flashing lamp, size: 72 * 24mm Iburu: Ọsọ ọsọ carbon nchara ABEC-5 Ngwaike: Iron metal efere na chrome esichara, mgbe nchara. Mbukota: Onyinye igbe, 20 ụzọ abụọ / ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / airszọ abụọ: $ 5.60 Whegba Ejiri Akụkụ: 1. wheelgbagharị ụkwụ, nkedo a na-atụkwasị obi na-atụgharị iji gbanwee nha 2. Igwe dị nro dị obere na ọkụ, mfe na-ebu, nwere ike arụnyere na ewepụghị akpụkpọ ụkwụ na uche ...
Na-egbu maramara JB132312
Mgbodo: eyi Plastic, Otu size dabara niile, size nwere ike ịbụ mgbanwe. Wheel: 82A PU wheel with 3-Front LED flashing lights, size: 72 * 24mm Iburu: Ọsọ ọsọ carbon nchara ABEC-5 Ngwaike: Iron metal efere na nwa zinc esichara, mgbe nchara. Mbukota: Onyinye igbe, 20 ụzọ abụọ / ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / airszọ abụọ: $ 4.60 Whegba Ejiri Akụkụ: 1. wheelgbagharị ụkwụ, nkedo a na-atụkwasị obi na-atụgharị iji gbanwee nha 2. Igwe dị nro dị obere na ọkụ, mfe na-ebu, nwere ike arụnyere na ewepụghị akpụkpọ ụkwụ na ...
Na-egbu maramara JB151313
Mgbodo: eyi Plastic, Otu size dabara niile, size nwere ike ịbụ mgbanwe. Wheel: 82A PU wheel with 3-Front LED flashing lamp, size: 70 * 24mm Iburu: Ọsọ ọsọ carbon nchara ABEC-5 Ngwaike: Iron metal efere na Blue zinc esichara, mgbe nchara. Mbukota: Onyinye igbe, 20 ụzọ abụọ / ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / ụzọ abụọ: $ 4.80 Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ: ihe ọhụrụ, agba agba, ike dị elu, ezigbo mgbanwe; Ihe akụrụngwa: PVC, nwere ụfọdụ mgbanwe na eyi nguzogide; Iburu: Iron amị, ezigbo onye na ...
Na-egbu maramara JB161311
Aka mgbodo: PA Plastic, Otu size dabara niile, size nwere ike ịbụ mgbanwe. Wheel: 82A PU wheel na-enweghị Ikanam na-egbu maramara ọkụ, nha: 72 * 24mm Iburu: Ọsọ ọsọ carbon nchara ABEC-5 Akụrụngwa: Efere efere ígwè nke ejiri chrome rụọ ọrụ, mgbe nchara. Mbukota: Onyinye igbe, 20 ụzọ abụọ / ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / ụzọ abụọ: $ 4.60. Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu: 1.Sileoth Wheels Ezi nhọrọ nke ihe, ụdị ejiji na atụmatụ aghụghọ. Enwere ike eyi ha na akpụkpọ ụkwụ ọ bụla. The wiil na-agbanwe na osisi osisi ...
Na-egbu maramara JB152313
Mgbaaka: PP Plastic, Otu nha dabara niile, nha nwere ike idozi wiil: PVC wheel with 3-Front LED flashing lamp, size: 70 * 24mm Bearing: High speed carbon steel ABEC-5 Hardware: Iron metal plate with Blue zinc processed, mgbe ajari. Mbukota: Onyinye igbe, 20 ụzọ abụọ / ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / ụzọ abụọ: $ 4.20 Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ: ọhụrụ ihe, na-enwu gbaa agba, elu ike, ezi mgbanwe Wheel ihe: ịkwanyere, na ụfọdụ ekwedo na-eyi ndị na-eguzogide Iburu: Iron agba, ezigbo onye na-adịghị eguzogide ...
Na-egbu maramara JB152323
Mgbodo: eyi Plastic, Otu size dabara niile, size nwere ike ịbụ mgbanwe. Wheel: wiilị PVC na ọkụ 3-Front LED na-enwu gbaa, nha: 70 * 24mm Iburu: Ọsọ ọsọ 608ZZ Akụrụngwa: Efere efere igwe na Blue zinc hazie, mgbe nchara. Mbukota: Onyinye igbe, 20 ụzọ abụọ / ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / :zọ abụọ: $ 3.60 izọ itụ :tụ: 1. Mgbe i mechara nkwadebe ndị gara aga, malite ịmịcha, tinye ụkwụ gị na njedebe nke ụkwụ nke ọzọ. , tinye isi abụọ ahụ n'otu oge, bulie mkpịsị ụkwụ n'ihu ruo 7-8cm site na ...
Na-egbu maramara JB162323
Mgbaaka: eyi, Plastic, Otu size dabara niile, size nwere ike ịbụ na-agbanwe agbanwe PVC wheel na-enweghị ọkụ, size: 72 * 24mm Iburu: elu na-agba 608ZZ Hardware: Iron metal efere na-acha anụnụ anụnụ zinc esichara, mgbe nchara mbukota: Onyinye igbe, 20 ụzọ abụọ / ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / ụzọ abụọ: $ 2.20 Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ: ihe ọhụrụ, agba agba, ike dị elu, ezigbo mgbanwe; Ihe akụrụngwa: PVC, nwere ụfọdụ mgbanwe na eyi nguzogide; Iburu: Iron amị, ezigbo onye na-adịghị eguzogide Agba: nwa, acha anụnụ anụnụ, pink, gree ...